Home Wararka Al Shabab oo weerar qorsheysan la beegsatay injineero Turki ah
Al Shabab oo weerar qorsheysan la beegsatay injineero Turki ah
Sida ay sheegayan wararka imaanaya magaalada Afgooye Ururuka Argagaxisada Al Shbaab ayaa qarax Ismiidaamin ah la beegsaday Injineerada Turkida ah ee ku howlan dhismaha Waddada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye. Qaraxa ayaa la sheegay in uu fuliyay qof watay Boorso laga soo buuxiyay Walxaha qaraxa,islamarkaana uu bartilmaameedsaday Injineerada Turkida iyo Shaqaalaha dhisaya Wadadaas oo xilligaas la sheegay in ay shaqada soo galeen oo ay howl billaabeen.
Dhanka kale goobjoogayaal ayaa sheegay qaraxa ka hor ciidamada gaarka u tababaran ee Haramcad in ay ka shakiyeen Ninka islamarkaana ay rasaas ku rideen hase’ahaate uu is qarxiyay markii u ku soo dhawaaday Injineerada iyo shaqaalaha,waxaana jira khasaaro. Alshabaab ayaa sheegtay masuuliyadda qaraxa iyaga oo sheegay in Ismiidaamiye iyaga ka tirsan uu beegsaday goob ay ku sugnayeen Saraakiil Ajaanib Turki ah iyo kuwa dowladda fedraalka Soomaaliya.
Alshabaab ayaa dhankooda sheegtay in qaraxa ay ku dileen Sarkaal Turki ah iyo Askari ka tirsan ciidamada booliiska qeybtooda sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad.